Basikety N1A: nanao pao-droa ny ekipan’Analamanga | NewsMada
Basikety N1A: nanao pao-droa ny ekipan’Analamanga
Nifarana, omaly, ny lalao fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara 2018, taranja basikety N1A lahy sy vavy. Nandrombaka ny amboara ny ekipan’ny MB2All Analamanga teo amin’ny sokajy vehivavy. Ny ekipan’ny CosPN Analamanga kosa ny misalotra ny anaram-boninahitra ho an’ny sokajy lehilahy.
Ady mafy ny an’ny ekipa niaatrika ny lalao famaranana, indrindra ny teo amin’ny sokajy vehivavy. Nifanenjika hatrany ny isa teny amin’ny solaitrabe, hatramin’ny ora farany. Nifandimby nitarika ihany koa ireo ekipa nifanandrina. Fitaintainana no hita soritra teny amin’ny mpijery, hatramin’ny sengondra farany nifaranan’ny lalao teo amin’ny sokajy vehivavy ity. Lavon’ny ekipan’ny MB2All Analamanga tamin’ny isa hety dia hety, 62 no ho 58, ny SBBC Boeny. 24 sengondra tsy hifaranan’ny lalao ny nahazoan’ny MB2All ny isa tombony ka izao nibatany ny anarana maha tompondaka nasionaly 2018 ny taranja basikety N1A vehivavy izao. “ Dimy taona aty aoriana, niverina eo am-pelantanan’ny MB2All ny amboara. Ady mafy vao tonga amin’izao dingana izao nefa mahafaly ny fandresena satria mpilalao niara-lehibe sy niara-novolavolaina nandritra ny taona maro no nitondra izao fahombiazana izao”, raha ny nambaran’ny mpanazatra ny ekipa MB2All.
Mbola azon’ekipan’Analamanga ihany koa ny amboara ho an’ny sokajy lehilahy. Nibata ny fandresena ny CosPN Analamanga nanoloana ny ekipan’ny ASCB Boeny. Efa tazana hatrany am-panombohan’ny lalao ny teknika mahomby nentin’ny ekipa avy eo anivon’ny polisim-pirenena. Tetsy ankilany, tsy teo am-pelatanan’ny ASCB ny vintana fa mora ho an’ny CosPN ny nandavo azy. Tsy ampy rahateo ny teknika nentina niatrika ny lalao famaranana ho an’ny ekipan’ny Boeny, sokajy lehilahy. Na teo aza izany, niezaka nanenjika ny ASCB tao anatin’ny ampahefa-potoana farany, saingy hita ho efa reraka ka tsy nahatohitra intsony. Nisaraka tamin’ny isa 75 no ho 54 ny roa tonta.